Sundresses - Summer 2016
Sarafan dia akanjo, nefa tsy misy akanjo - izany no tena mampiavaka azy. Sarafanam-poko sarobidy amin'ny 2016 - karazana safidy maro samihafa amin'ny haben'izy ireo, ny halavany, ny endriny, ny lamba, ny akora sy ny halsa.
Karazan'akanjo maoderina: antsipiriany, fomba amin'ny 2016
Ny glamour manokana ho an'ny sarafan amin'ny 2016 dia ny lamody miverimberina amin'ny amerikana. Ny endriky ny universe - ho an'ny sokajin-taona rehetra sy ho an'ny habeny rehetra. Mijery tsara sy mitazam-potsiny. Etsy ankilany, modely toy izany miaraka amin'ny tendany dia tena mifanentana amin'ny firavaka firavaka, na inona na inona karazana lamba sy ny lokony. Ny modely toy izany dia mahavariana amin'ny hariva, indrindra amin'ny halavan'ny "maxi". Sarafany lava be no tena ilaina amin'ny fahavaratra amin'ny 2016.
Tombontsoa iray hafa - fehin-tenda iray. Ity modely ity dia tsy natao ho an'ireo vehivavy "mihomehy", sarotra sy tsy mifandray. Saingy, endriky ny glamour sy ny bonus ho an'ny herim-po - dia mibaribary. Amin'io fanapahana io, ny endriky ny sarafan dia mifatotra na mihidy manodidina ny tendany, manokatra ny soroka, ny tanana ary mamela anao ho maimaim-poana sy mora.
Deep décolleté tsy mandeha amin'ny fomba. Ity takelaka hariva ity, ary isan'andro. Mitandrema - ny fahatanterahana dia zavatra kely.
Aza hadinoina ny fomba grika - akanjo lava iray, tapa-bozaka, lamba ary rambony. Colours - pastel, lava - indray, maxi.
Miaraka amin'ny tendron-tery mahery - manitsy ny halavany isika, manakatona ny lohalika. Ny fametrahana henjana ny vatany dia hamela "hampiseho" ny ranjony - sarafan-tsarety fohy efa tsy nesorina tamin'ny 2016. Azonao atao ny manandrana ny halavan'ny tranombarotra - aza hadino. Manaova fanandramana, fa aza ovainao izany, vehivavy ianao!
Tavy, loko, akanjo
Classics dia rehefa manaraka fomba iray ianao. Fashion - rehefa fantatrao ny fomba hampifangaro azy ireo, milalao azy ary mandresy. Sarafana mody amin'ny 2016 - fomba fanao amin'ny minimalism, izany hoe, tsotra voa-doko, loko miharo, farafahakeliny ny antsipiriany, indrindra fa ny volony, ary ny farany ambany. Saingy afaka "manampy fomba" miaraka amin'ny kiraro sy ny fitaovana. Miezaha foana hitovy ny loko mitovy, fa ny lokony hafa. Amin'ny fahavaratry ny 2016 dia azo atao ny manao satroka amin'ny blouzary. Kitapo fotsiny izany. Tavy marevaka mifangaro amin'ny lamba malefaka, ary azo atao izany! Fonenana baolina, kapa miaraka amin'ny tavy maina, eo amin'ny savily na solefaka, mameno ny garderobe.
Modely amin'ny fahavaratra 2016 sy ny kofehy vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly. Mifanaraka tsara amin'ny rafitra sy ny loko ny tapa-tavoara dia manaloka ny lozam-pifamoivoizana! Ao amin'ny tady na eo amin'ny tendany dia mifangaro amin'ny firavaka amin'ny vato, loko na pastel loko - ny tsirony sy ny herimpo avy amin'ny tompony sy ny mpanamboatra.
Ny lamaody mody amin'ny nail polish 2015
Fashion dresses 2017 - inona ny akanjon'ny fitafiana amin'ny taona vaovao?
Vehivavy Jackets 2013
Ny poketrany dia nirohotra tamin'ny 2015
Sary famokarana maotina Zyvanshi 2013
Dresses - Trends 2015
Chiffon Dresses 2017 - ny modely tsara indrindra ary ny lamaody farany indrindra amin'ny loko vaovao
Coat - ny fironana amin'ny vanim-potoana 2015-2016
Fashion akanjo amin'ny fizarana 2015
Fiaramanidina feno ny vehivavy 2014
Toe-karena Branded 2014
Miley Cyrus sy Liam Hemsworth mankafy honey?
Ahoana raha tapaka ilay fitaratra?
Dream-cat - inona no nofinofin'ny vehivavy?
Prevention of hepatitis virus
Zazavavy vavy amin'ny vanim-potoana Biedermeier
Ny endrik'i Katy Perry avy ao Prada dia nahatonga ny mpankafy ny mpankafy
Playboy no nanonona hira mampiady indrindra amin'ny 2016
Ahoana ny fomba fitondranao lehilahy?
Fanamboarana paoma mitafo amin'ny volana Aogositra
Homemade lemonade avy amin'ny voankazo
Alec Baldwin nandeha tamin'ny daty nisy ny vadin'ny John F. Kennedy?
Ahoana no fomba handraisana ny pancakes amin'ny yogourt?
Sarin'i Selena Gomez
Lobelia - mitombo avy amin'ny voa
Estradiol amin'ny fitondrana vohoka
Beige sandals - kiraro ankapobeny ho an'ny vanim-potoana fahavaratra
Inona no vaksiny atao any amin'ny hopitaly?
Firy no malala-tanana?
Rosie Huntington-Whiteley dia nanolotra ny onjam-peon-kirany voalohany
Mahafinaritra tokoa ny mihantona tulle?
Akanjo lava mitandahatra 4